Mitrakà fa Mbola Misy Fanantenana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | AZA MAMOY FO!
Satria Mbola Misy Fanantenana
‘Ny mpandefitra no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.’—SALAMO 37:11.
Milaza ny Baiboly fa “mitebiteby lava” ny olombelona. (Joba 14:1) Samy manana ny zavatra mampahory azy ny tsirairay. Misy anefa kivy tanteraka satria mahatsapa fa tsy misy mangirana mihitsy ny fiainany, ka tsy manantena zavatra tsara intsony izy. Izany koa ve no tsapanao? Matokia fa manome fanantenana tena azo antoka ny Baiboly, ho anao sy ny olona rehetra. Ireto misy ohatra:
Fiainana tsara be no nokasain’i Jehovah Andriamanitra ho antsika.—Genesisy 1:28.
Mampanantena i Jehovah fa hataony paradisa ny tany.—Isaia 65:21-25.
Azo atokisana fa tsy maintsy ho tanteraka izany. Hoy mantsy ny Apokalypsy 21:3, 4:
“Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.”
Tsy nofinofy fotsiny akory izany, fa efa izay mihitsy no kasain’i Jehovah hatao. Mahery izy ka vitany tsara izany, sady izy rahateo maniry hanao an’ilay izy. Tena azo antoka ny fampanantenana omen’ny Baiboly ho an’ny olona rehetra. Mahereza àry fa aza mamoy fo!
TADIDIO IZAO: Na toy ny sambo eny ambony ranomasina misamboaravoara aza ny fihetseham-ponao, dia toy ny vatofantsika azonao ifikirana ny fanantenana omen’ny Baiboly.
IZAO ATAO ANDROANY: Ezaho fantarina hoe inona no ampanantenain’ny Baiboly momba ny hoavy. Vonona hanampy anao hahita izany ny Vavolombelon’i Jehovah. Afaka miresaka amin’izay Vavolombelona hitanao ianao, na koa miditra ao amin’ny www.jw.org/mg. *
^ feh. 11 Andramo izao: Jereo ny www.jw.org/mg, ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > FITEHIRIZAM-BOKY. Tadiavo ao ny teny toy ny hoe “kivy” na “mamono tena”, dia hahita torohevitra tsara ianao.
Misy zavatra telo ataon’Andriamanitra mba hanampiana anao rehefa kivy ianao.
Hizara Hizara Satria Mbola Misy Fanantenana